eSancharpati | के हो सन्दीपले पाएको टियर–५ भिसा, किन खेल्न पाएनन् द हन्ड्रेड ? - eSancharpati के हो सन्दीपले पाएको टियर–५ भिसा, किन खेल्न पाएनन् द हन्ड्रेड ? - eSancharpati
६ श्रावण २०७८, बुधबार १५:०१
युके जान विभिन्न किसीका भिसा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो दक्षता, आवश्यकता र त्यहाँको मापदण्डअनुसार भिजिट भिसा, स्टडी भिसा, वर्किङ भिसालगायत अनेक भिसा छन्। यीमध्ये सन्दीप गएको ‘टियर भिसा’ पोइन्टमा आधारित भिसा हो। अंग्रेजी भाषाको निपुर्णता, दक्षता, उमेरलगायत विभिन्न कुराले टियर भिसामा पाइने पोइन्ट निर्धारण गर्दछ। टियर भिसामा पाँचवटा श्रेणी हुन्छन्।
ईसिबीले सन्दीपलाई पहिल्यै एउटा भिसा तोकेर यसमा आए मात्र प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने भनेर जानकारी गराउनु पर्थ्याे। तर, उनलाई प्रायोजनको मापदण्डका बारेमा मात्र अवगत गराइएको थियो। इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डको कमजोरी वा हेल्चेक्राइँका कारण सन्दीप ‘द हन्ड्रेड’मा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसैले, उनले फेसबुकमार्फत् ईसिबीलाई भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन सुझाव पनि दिएका छन्।sabai khell
##nepali criket team ##sandip lamichhane #किन खेल्न पाएनन् द हन्ड्रेड ? #के हो सन्दीपले पाएको टियर–५ भिसा
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:१७
रोहित र सन्दीप चम्किँदा पपुवा न्युगिनी बिरुद्द नेपालको जित
२६ भाद्र २०७८, शनिबार ०७:४५
नेपाल दियो पपुवा न्युगिनीलाई २३४ रनको टार्गेट
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार २०:३८
नेपालको पपुवा न्यगिनीविरुद्ध २ विकेटको संघर्षपूर्ण जित
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार २१:२४